MLBB Phoveus Hero လမ်းညွှန် : အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ပုံ၊ Emblem နှင့် အခြားအကြံပြုချက်များ | Codashop Blog MM
MLBB Phoveus Hero လမ်းညွှန် : အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ပုံ၊ Emblem နှင့် အခြားအကြံပြုချက်များ
မျက်တောင်မခတ်ပါနဲ့! မျက်တောင်ခတ်ပြီးပြေးတဲ့ရန်သူတွေကို လိုက်ပြီးဒဏ်ပေးမယ့်နောက်ဆုံးပေါ် fighter ကြီးရောက်လာပြီ!
Shadow of Dread လို့ ခေါ်တဲ့ Phoveus ကတော့ Mobile Legends ရဲ့အသစ်လွင်ဆုံး fighter hero ဖြစ်ပါတယ်။ သူက ဗလတောင့်တောင့်နဲ့ magic damage တွေထုတ်တဲ့အကောင်ကြီးဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့သေလောက်တဲ့ တုတ်ကြီးကိုသယ်ပြီး လမ်းလျှောက်လာတဲ့ပုံစံက အတော့်ကို ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါနဲ့ သူက မျက်စိမမြင်ဘူးဆိုတာ သိပါသလား? သူက သူ့ရဲ့လက်နက် Astaros ကို လမ်ပြအဖြစ် တိုက်ပွဲမှာသုံးပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ပုံ၊ emblem set, battle spell, counter လုပ်နည်းတွေနဲ့ တခြားကစားရာမှာအကြံပြုချက်တွေကို လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Phoveus ကိုလုံးဝလျှော့မတွက်ပါနဲ့၊ သတိပေးထားပါမယ်၊ မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်း ဘာမဆိုဖြစ်ပျက်သွားနိုင်တယ်နော်! ပြီးတော့ Lancelot, Gusion နဲ့ Harith ကိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်း ကြိုသတိပေးထားချင်တာက Phoveus နောက်ကလိုက်လာပြီး သင့်ကို တစ်ချက်တည်းအသေသတ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။
Phoveus ကိုသုံးပြီး MLBB မှာဘယ်လိုနိုင်မလဲ
Phoveus က အမြန်ပြေး/ခုန်နိုင်တဲ့စကေးတွေကြောင့် ရန်သူတွေကိုအလွယ်လေးလိုက်သတ်ပြီး counter လုပ်နိုင်တာကြောင့် အကောင်းဆုံး fighter တစ်ယောက်ဆိုတာ ငြင်းရခက်ပါတယ်။ Phoveus ကိုသုံးပြီးအနိုင်ယူဖို့ အကြံပြုချက်တစ်ချို့ကတော့ :
အမြန်ပြေးနိုင်တဲ့( သို့မဟုတ်) စကေးတွေပြန်ဖြည့်နိုင်တဲ့ရန်သူတွေကို သတိထားပါ။ သူတို့က Phoveus ရဲ့ ultimate ကို စတင်နိုင်စွမ်းရှိပြီးတော့ ပစ်မှတ်ပေါ်ကို ပြင်းပြင်းလေးထိုးနှက်စေပေမယ့် တစ်ဖက်မှာတော့ သူ့ရဲ့ စကေး cooldown ကိုလည်းလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ သူ့မှာ အခြေအနေပေးတဲ့အချိန်တွင်းမှာ တိုက်ခိုက်ဖို့ ဆက်တိုက်အမြန်ခုန်နေရမှာဖြစ်ပြီး ဒါတွေအားလုံးလုပ်ဖို့ ၁၂စက္ကန့်လောက်ပဲရှိပါတယ်။
Astraos Dread ကိုနားလည်ပြီး အသုံးချတတ်ရပါမယ်။ သူ့ရဲ့ first skill ကိုစသုံးရင် Astraos Dread ကပွင့်သွားပြီး Phoveus ကို ထပ်တိုး movement speed နဲ့ shield ကို ခဏထုတ်ပေးတာကြောင့် အချိန်ကိုက် ထွက်ပြေးဖို့ကိရိယာသဖွယ် အသုံးဝင်ပါတယ်။
Phoveus က သူဖြုန်းနိုင်တဲ့ စကေးတွေကို ရေရှည်သုံးဖို့ဆို mana items တွေလိုပါတယ်။ ပြီးတော့ Oracle ကိုလည်း သူ့ shield တိုးအောင် core item အဖြစ်ထားသင့်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ second skill ကို ချုံထဲမှာပုန်းနေတဲ့ရန်သူတွေကို ဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်သုံးပါ။ (သင် ချုံထဲမှာ ပုန်းနေစရာမလိုဘဲ သုံးနိုင်ပါတယ်)
ကိုယ့်အသင်းသားတွေနဲ့ပေါင်းပြီး ရန်သူတွေ farm နေတာကိုလိုက်ဖျက်ပါ။ ultimate ရပြီးရင် Phoveus က အဓိက အမြန်ပြေး/ခုန်နိုင်တဲ့သူတွေအနားရောက်ရင် စိတ်တိုတတ်တယ်။ Level4ရောက်ရင် အုပ်စုလိုက်တိုက်ခိုက်ရာမှာ ပူးပေါင်းပါ။
ရန်သူတွေကို HP နည်းနည်းလေးနဲ့လိုက်မိရင် ကိုယ့် ultimate စကေးကိုများများသုံးပါ။ အကယ်၍ ရန်သူက အမြန်ပြေး/ခုန်ရင်တောင် အလွယ်တကူတိုက်ခိုက်နိုင်မှာပါ။
သူ့ရဲ့ skills တွေကို အဆင့်မြှင့်တဲ့အခါ ဒါတွေကိုအရင်ဦးဆုံးလုပ်ရပါမယ်။ စကေး 1 (အရင်ဖွင့်ပြီး အမြင့်ဆုံးကိုရောက်အောင်လုပ်ပါ) စကေး2(နောက်ဆုံးမှ အမြင့်ဆုံးရောက်အောင်လုပ်ပါ) စကေး3(ဖြစ်နိုင်ရင် အဆင့်မြှင့်ပါ)
Phoveus စကေးများ/ စွမ်းရည်များ
ရန်သူတစ်ယောက်က Blink ဒါမှမဟုတ် Charge စကေးတွေသုံးတဲ့အခါတိုင်း Phoveus ရဲ့ skill cooldowns တွေအားလုံးကိုလျှော့ချတယ် သို့မဟုတ် 1 စက္ကန့်နှုန်းနဲ့သွင်းပေးတယ်။
Phoveus က မြေကြီးကိုရိုက်ချပြီး ရန်သူတွေကို damage ထုတ်တယ်။ ဒီစကေးနဲ့ရန်သူတွေကို တိုက်ခိုက်တဲ့အခါ သူက Shield နဲ့ Movement Speed ကိုထပ်တိုးပြီးရတယ်။ ရန်သူ hero, creep ဒါမှမဟုတ် Phoveus ကိုယ်တိုင် သွားထိရင်တောင် သူကပွင့်ထွက်ပြီးတော့ damage ထုတ်တယ်။
Phoveus က Astaros Eye ကို ခေါ်လိုက်တယ်။ ခဏအကြာမှာ သူကတဖြည်းဖြည်းကျုံ့သွားပြီး ရန်သူတွေကိုလည်း သူ့ရဲ့ အလယ်ဗဟိုကို ဆွဲခေါ်သွားပြီး damage ထုတ်တယ်။
ရန်သူတစ်ယောက်ယောက်က blink သို့မဟုတ် charge စကေးတွေကိုသုံးရင် Phoveus က သူတို့ရဲ့နေရာကို ချက်ချင်းခုန်နိုင်ပြီး လက်သီးကြမ်းကြမ်းတစ်လုံးပစ်ထည့်လိုက်ပြီး သူကတော့ Shield ရပါတယ်။ အခြေအနေပေးရင်တော့ 12 စက္ကန့်ကြာတဲ့အထိ အကြိမ်ကြိမ်သုံးလို့ရပါတယ်။
Phoveus အတွက် အကောင်းဆုံးလမ်း
Phoveus ကို ဘေးလမ်းတွေမှာ ကစားတာပိုကောင်းပါတယ် အထူးသဖြင့် Experience လမ်းမှာကစားတဲ့အခါ သူ level မြန်မြန်တက်အောင် ကူညီနိုင်ပါတယ်။ သူက သူ့ရဲ့ shield ကြောင့် ကြိုက်တဲ့ heroes တွေနဲ့တွဲပြီးယှဉ်ပြီး အကြမ်းပတမ်းလည်းဆော့လို့ရပါတယ်။
Phoveus အတွက်သုံးဖို့ စကေးအတွဲအစပ်များ
Phoveus ရဲ့ basic combo အတွက် သူ့ရဲ့ ultimate ကို စကိုင်ဖို့ second skill ကိုစသုံးပြီး မြန်မြန်သူ့ရဲ့ first skill နဲ့လိုက်သုံးရပါမယ်။ (2-3-1-3)
Phoveus အတွက် အကောင်းဆုံး Battle Spell များ
Phoveus အတွက်အကျိုးရှိမယ့် spells (၂) မျိုးရှိတယ်။ ပထမတစ်ခုက Flameshot – ဘာလို့လဲဆိုတော့ Phoveus ရဲ့ Ultimate ကို တွန်းကန်ထွက်လာစေပြီး နောက်ထပ်တစ်ခေါက် အမြန်ခုန်လို့ရလို့ပါပဲ။ နောက်တစ်ခုကတော့ Execute – ရန်သူတွေ low HP နဲ့ ပြေးနေတဲ့အချိန် တစ်ခါတည်းအပြတ်ဖြတ်လိုက်နိုင်လို့ပါပဲ။
Phoveus အတွက် အကောင်းဆုံး Emblem Set များ
Phoveus ရဲ့ magic damage ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချဖို့ဆို Custom Magic Emblem ကိုသုံးပါ။ ထည့်ထားရမယ့် talent points တွေကတော့ :
Movement Speed ကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်တဲ့ Agility
Magic penetration အတွက် Observation
အပို magic damage အတွက် Impure Range
အဲလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ farming အတွက် အခက်အခဲဖြစ်နေရင် Mystery Shop ကိုရွေးနိုင်ပါတယ်။ (Equipment item တစ်ခုကို သူ့စျေးနှုန်းရဲ့ 90% နဲ့တင်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။)
Phoveus အတွက် အကောင်းဆုံး Build
Phoveus က သူဖြုန်းနိုင်တဲ့ စကေးတွေကို ရေရှည်သုံးဖို့ဆို mana items တွေအပေါ်အာရုံစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပထမစကေးနဲ့ Ultimate ကဆက်တိုက်သုံးလို့ရတာကြောင့် mana ခဏခဏလျော့တတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ defense အတွက် ပစ္စည်းတွေလည်းထည့်ထားပါ။
Phoveus က counter လုပ်နိုင်တဲ့ heroes များ
သူ့ရဲ့ စပါယ်ရှယ်စကေးတွေကြောင့် Phoveus က အမြန်ခုန်နိုင်တဲ့ heroes တွေကို သူ့ရဲ့ သူမတူတဲ့ ultimate နဲ့ counter လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဥပမာတွေကတော့ :
Phoveus ကို counter လုပ်နိုင်တဲ့ heroes များ
တစ်ဖက်မှာတော့ ဒီ hero တွေကလည်း Phoveus ကို counter ပြန်တိုက်နိုင်ပြီး သူ့ရဲ့ shield ထွက်တဲ့ effect ကို ပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာတွေကတော့ :
Previous articleSamurai Era: Rise of Empires ရဲ့ 20% Cash အပိုလက်ဆောင်ရယူနိုင်မယ့် ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဥ်
Next articleFree Fire ရဲ့ ၀ူခုန်း လမ်းညွှန်: All Hail the Monkey King!